Global Voices teny Malagasy » Tsy Isalasalàna Fa Betsaka Itoviana Ny Ben’ny Tanàna Vaovaon’i São Paulo sy Donald Trump · Global Voices teny Malagasy » Print
Tsy Isalasalàna Fa Betsaka Itoviana Ny Ben'ny Tanàna Vaovaon'i São Paulo sy Donald Trump
Voadika ny 04 Oktobra 2016 13:33 GMT 1	 · Mpanoratra Taisa Sganzerla Nandika Tantely
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
João Doria, ben'ny tanàna vao voafidy tao São Paulo, tamin'ny nanehoany ny fahitan'ny firenena “Ny Mpiofana”, ny taona 2010. Dikasary YouTube
Mpandraharaha manana fananana vinavinaina ho 170 tapitrisa reais Breziliana izy, na eo amin'ny 52 tapitrisa dolara Amerikana eo. Nanorina harena be taminà orinasa lehibe fito izy, any anatin'ireo sehatra avy amin'ireo fikarakarana hetsika ka hatramin'ny trano fanontàna. Nampiantrano fandaharana telo tamin'ny fahitalavitra niresahana ny fiainana andavanandro tao amin'ny tambajotranà fahitalavitra izy– tao anatin'ireny ny fijery Breziliana ny atao hoe “Ny Mpiofana”.
Ny 2 Oktobra taorian'ny fampielezankevitra izay nampivaky ny antokony afovoany havanana, voafidy ho ben'ny tanànan'ny tanàna lehibe indrindra ao Brezila izy taminà fandresena goavana.
Io ve no tena Donald Trump-n'i Brezila?
Ilay olona ‘ivelany’
Mihoatra noho ny fahaizan'izy ireo ny filalaovana fiainana andavanandro ireo fitoviana. Toa an'i Trump, João Agripino da Costa Doria Júnior, na João Doria raha afohezina, dia tonga avy any ivelan'ny sehatra politika, zavatra izay tena manan-danja be tokoa amin'ny tontolo politika ao Brezila ankehitriny. Nahatonga ireo mponina ho diso fanantenana tanteraka amin'ny kilasy politika rehetra ireo fanadihadiana “lava jato” taminà saritsarinà kolikoly mitentina an-davitrisany dolara nahatafiditra ny Petrobras, ilay orinasanà solika tantanan'ny fanjakana, sy ireo orinasa lehibe maro misahana fanorenana.
Tsy mahagaga araka izany raha ny Alahady (2 Okt) no avo indrindra  ny tahan'ny tsy fandraisana anjara sy ny vato fotsy ary ny vato maty, raha oharina amin'ireo fifidianana enina teo aloha. Mbola nihoatra noho ny vato azon'i Doria aza ny fitambaran'ny isan'ireo mpifidy tsy niraharaha ny fifidianana.
Nibaby ny vokany noho ireo fiampangàna kolikoly nihombo hatrany, fitomboan'ny fikorosiana ary tsy fahaiza-mitondran'ny Filoha izay voaendaka teo amin'ny toerany, Dimla Rousseff, ny Antokon'ny Mpiasa afovoany havia (na PT), izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 13 taona.
Napetraka tamim-pahaizana i Doria mba haneho io fihetsehampo tsy tia politika sy fanoherana ny PT io. Araka ny naveriny tsara, “mpandraharaha izy fa tsy mpanao politika”. Tamin'ny fampielezankevitra, nampanantena ny “hamafa ny PT hiala an'i São Paulo” izy ; ny teny fanevany, “mandehana mafy, São Paulo”, dia hanihany mivantana amin'i Fernando Haddad, ben'ny tanàna ankehitriny ao São Paulo avy tamin'ny Antokon'ny Mpiasa, izay nampiditra fetranà hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ireo làlambe migodàna izay tena feno fiara be indrindra ao an-tanàna, ka nahatezitra mpamily maro.
Mpandraharaha manankarena manana fanohanana avy amin'ireo sokajy ambany
Nahazo vato betsaka dia betsaka avy tamin'ireo faritra ambany tanàna mahantran'i São Paulo i Doria, na dia hoe tsy anisan'ny avy amin'ireo sokajy ambany ao amin'ny firenena aza izy. Ilay ben'ny tanàna voafidy no filohan'ny LIDE, fikambananà orinasa 1.700 isa izay manome ny 52%-n'ny PIB an'i São Paulo — fanjakana izay manome ny 32%-n'ny PIB nasionalin'i Brezila, ny fahenina amin'ny toekarena eto an-tany. Ao anatin'ireo famoahan'ny vondron'orinasany izao ny gazetiboky Caviar Lifestyle, izay maneho ireo fanjifàna afo vidy sy ny fiainan'ny saranga ambony. Nampanantena ny hanala amin'ny fitantanam-panjakana  ireo kianja fitsngantsanganana, kianja filalaovana kitra, làlana fandehanan'ny bisikileta sy fiara fitateram-bahoaka, ao São Paulo ny ben'ny tanàna vaovao, ary hampitombo ihany koa ireo toerana azo idirana any amin'ireo hopitaly sy fikarakarana zaza, amin'ny fampiasana ny tambajotranà fitandroana fahasalamana tsy tantanan'ny fanjakana.
Eny imasom-bahoaka, miakanjo mihaja sy voakajy tsara foana i Doria, miaraka amin'ireo akanjo vitan'ny matihanina momba izany, avy any amin'ireo fitoeran'akanjon'i Louis Vuitton ka hatramin'ireo fehinkibo Hermès mirentirenty manome pitsopitsony ny fomba fiakanjony amin'ny akanjo mafana “cashmere” mihodina eo amin'ny tendany. Nahatonga fianjonanjonan'ireo mpifaninana aminy io sariny tsy misy kihanina ety ivelany io foana. Teny amin'ny fanaovana fampielezankevitra, nihodinkodina tao amin'ny media sosialy sy nampahazo azy ny solon'anarana hoe “Richard Rich” (Richard Mpanankarena) ny sariny marikivy be eo am-pisotroana kafe mora vidy sy mihinana pastel  (karazana mofo voaendy) tao amin'ny iray amin'ireo “paradias”n'i São Paulo (toeram-pisakafoanana tsotra izay manamarika ny tanàna). Kanefa araka ny hita, tsy nahasakana azy tsy handrombaka ny vaton'ny maro an'isa 56 isan-jato tao amin'ireo toeram-pifidianana 58 tao São Paulo izany.
“Richard Rich” João Doria, ben'ny tanàna vaovaon'i São Paulo, hita ho tsy mankafy ilay kafe may sy be siramamy loatra naroso tao amin'ny padarias-n'i São Paulo. Sary nozarazaraina be tao amin'ny media sosialy.
Politika taloha sarontsaronana ho toy ny vaovao
Sahala amin'i Trump ao amin'ny antoko Repoblikana, nahatonga fisaraham-bazana tsy manam-paharoa  tao amin'ny Antoko Demokratika Sosialy afovoany havanana, ny filatsahan'i Doria ho fidiana. Olona ivelany mihitsy no fahitan'ireo filohan'antoko sasany azy, nampangaina ho niantsampy teny amin'ny laharan'ireo mpanao politika teo amin'ny fitondrana fotsiny mba hahazo ny fitantanana ny tanàna manan-danja indrindra ao Brezila. Ny sasany amin'ireo mpifaninana aminy niampanga azy ho nividy vato tamin'ny savaranonando nisafidianan'ny antoko izay hisolo tena azy ary avy eo lasa lavitra hatramin'ny nitory azy tamin'izany mihitsy.
Nanana mpiahy natanjaka i Doria, mazava loatra: ny governoram-panjakanan'i São Paulo, Geraldo Alckmin, izay nanana ady mangatsiaka hatry ny ela tamin'ny mpitantana ny antoko (ao anatin'izy ireo, ny Filoha Breziliana teo aloha, Fernando Henrique Cardoso sy Aécio Neves, ny mpifaninana tamin'i Rousseff tamin'ireo fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2014). Maro ireo mahita ny fandresen'i Doria ao São Paulo ho fandresena manokana ho an'i Alckmin, izay manana fanantenana lehibe amin'ny fifaninanana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2018.
Ary na teo aza ny fanindrahindràny ny toekaren'ny tsena malalaka, nahazo tombontsoa be tamin'ny fifandraisany tamin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana i Doria. Naboraky ny tantara navoakan'ny gazety an-tsoratra Folha de S. Paulo  fa nahazo 10,6 tapitrisa reais ireo orinasany hatramin'ny taona 2005 tamin'ny fanaovana afera niaraka tamin'ny fanjakana, nandritra ireo governemanta samihafa nifandimby, tafiditra tamin'izany ny governemanta notantanan'ny Antokon'ny Mpiasa. Ny vola betsaka indrindra dia avy tamin'ny governemantan'i Geraldo Alckmin, izay nandoa 4,5 tapitrisa tamin'ny dokambarotry ny governemanta tao amin'ireo gazetibokiny mpamoaka vaovao.
Tao amin'ny Facebook, namintina  ny fiakaran'i Doria teo amin'y fitondrana ilay profesora ao amin'ny Anjerimanontolo mipetraka ao São Paulo, Pablo Ortellado:
Maravilhas do marketing político: um notório mauricinho foi transmutado em Joâo trabalhador; um político de velho tipo que rachou seu partido com a compra de votos nas prévias foi transmutado em gestor antipolítico; por fim, um administrador de empresas que fez carreira explorando as relações com o Estado foi transmutado em defensor da eficácia do setor privado. Comunicação é tudo. “Em política, tudo o que parece é”.
Zavatra tsaran'ny dokambarotra ara-politika: lehilahy iray mianjaika foana lasa niova ho John mpiasa mafy; niofo ho mpandraharaha manohitra ny politika ilay mpanao politika goaika antitra izay nampizara ny antokony tamin'ny fividianana vato nandritra ny savaranonando nisafidianana ny ho kandidàn'ny antoko; ny farany, mpandraharaha iray nanorina ny maha izy azy tamin'ny fitrandrahana ny fifandraisany tamin'ny fanjakana niova ho mpikatroka mafana fo amin'ny fampahombiazana ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny serasera no manome ny zavatra rehetra. “Amin'ny politika, izay heverina ho toy ny izy no izy”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/04/89676/
 avo indrindra: http://eleicoes.uol.com.br/2016/noticias/2016/10/02/sao-paulo-tem-maior-abstencao-e-votos-nulos-desde-1996.htm
 Nampanantena ny hanala amin'ny fitantanam-panjakana: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/10/02/Por-que-Jo%C3%A3o-Doria-foi-eleito-de-forma-t%C3%A3o-surpreendente-na-maior-cidade-do-pa%C3%ADs
 nahatonga fisaraham-bazana tsy manam-paharoa: http://piaui.folha.uol.com.br/materia/guerra-do-cashmere/
 tantara navoakan'ny gazety an-tsoratra Folha de S. Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/09/1817892-privatista-doria-recebeu-r-106-milhoes-de-governos.shtml?cmpid=comptw